Laftagareen oo Baydhabo ka daahfuray ololaha Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Laftagareen oo Baydhabo ka daahfuray ololaha Farmaajo
Laftagareen, wuxuu doonayaa in dhamaan xildhibaannada KGS, codkooda siiyaan Farmaajo, wuxuuna ka shaqeynayaa fulinta qorshishiisa, ee ku aaddan in is-beddel lagu sameeyo kuraasta ugu sarreeya dalka.
BAYDHABO, Soomaaliya – Madaxweynaha Koofur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed [Laftagareen], ayaa qaaday tallaabadi ugu horreysay ee ololaha dib u doorashada Farmaajo, wuxuuna kulan isugu yeeray dhamaan xildhibaannada ka soo baxay maamulkaas.
Sida la xaqiijiyay in ka badan 70 xildhibaan, ayaa maanta iyo berri ku wajahan xarunta gobolka Bay, kuwaas oo ka qeyb galaya, kulan dhowr u jeeddo leh, oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin abaabulkiisa qeyb ku leeyihiin.
U jeedka ugu weyn ee kulankaan, ayaa ah, in xildhibaannada Koofur galbeed, cododkooda mideeyaan, isla-markaana sameystaan hal kutlad iyo hoggaan gaar ah, si aysan u kala baahin codadkooda, xilliga doorashada.
Sidoo kale, kulanku, wuxuu hor-dhac, u yahay, madal la filayo in ay 25-ka bishan ku kulmaan, qaar ka mid ah xildhibaannada beelaha Dir, Digil iyo Mirifle, kuwaas oo la sheegay in ay is-baheysi gaar ah sameysteen.
Kulanka Baydhabo, ee 25-ka March, la qorsheeyay, ayaa lagu baraarugay in ay ka qeyb galayaan, Farmaajo iyo Fahad, taas oo dhalisay shaki ku aaddan qabsomiddiisa, maadaama la beddelay ajandihii hore.
Wuxuu miiska u garaacayaa in haddii uu fashilmo qorshaha is baheysiga qabiillada, ee ka dhanka ah [Hawiye], in qof uu isagu wato la geeyo xilka guddoomiyaha baarlamaanka, gaar ahaa Golaha Shacabka.
Farmaajo, wuxuu durbaanka u garaacayaa in Guddoomiyaha Baarlamaanka, laga dhigo shaqsi ka soo jeeda beelaha Hawiye, si Raxanweyn u qaadato xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, haddii uu isagu dib u soo laabto.
Labo maalin ka hor Laftagareen, wuxuu diiday, hannaanka loo marayo isu keenista, shahaado bixinta iyo dhaarinta xildhibaannada la doortay ee Labada Aqal ee Barlamaanka JFS, ee ay soo saareen Guddiga FEIT.
Hayeeshee, diidmada Laftagareen, waxaa ka danbeysay, canaanka Mareykanka, ee ku aaddan in la taageero, hannaanka ay isku raacsan yihiin, Guddiga doorashooyinka heer Federal iyo RW Maxamed Xuseen Rooble.